“Kadib ciyaarta waxaan jirkeyga saari jiray baraf mudo 4 ilaa iyo 5 saacadood”..Neymar Jr oo jawaab bixiyay kadib eedeymaha loo jeediyay – Gool FM
“Kadib ciyaarta waxaan jirkeyga saari jiray baraf mudo 4 ilaa iyo 5 saacadood”..Neymar Jr oo jawaab bixiyay kadib eedeymaha loo jeediyay
Dajiye July 21, 2018
(PSG) 21 Luulyo 2018. Neymar Jr ayaa ka jawaabay eedeymaha loo soo jeediyay intii lagu jiray Koobkii Adduunka 2018, sababa la xiriira inuu si xad dhaaf ah dhulka isugu tuura kadib marka uu la kulmo taakilo xidigaha kasoo hor jeeda.
Laakiin xidiga kooxda PSG ayaa wuxuu u xaqiijiyay wargeyska “Sun” ee dalka England inuu jirkiisa saari jiray baraf kadib kulan kasta uu ciyaaro mudo dhan 4 ilaa iyo 5 saacadood, si uu kaga soo kabto dhibaatooyinka uu lasoo kulmo.
“Miyaad u maleyneysaa inaan rabo inaan la kulmo dhaawac mar walba? Maya, waa arin aad iyo aad u xanuun badan”.
“Kadib ciyaarta waxaan jirkeyga saari jiray baraf mudo 4 ilaa iyo 5 saacadood, waa arin dhib badan, laakiin haddii aadan haysan waayo-aragnimo, ma fahmi doontid waxa socda”.
“Waxaan arkay waxa ay dadku ka hadlaan, waxaanan ku qaatay dareen jilicsanaan”.
Si kastaba Neymar Jr ayaa la kulmay dhaleeceen xoogan inta lagu jiray koobka aduunka 2018 ee dhawaan lagu soo xiray dalka Russia, waxaana lagu eedeeyay inuu si jaliin ah dhulka isugu tuuro si uu garsoorka ugu qanciyo in dhibato xoogan loo geestay.
RASMI: Macallin Jose Mourinho oo magacaabay Kabtanka kooxda Man United ee xilli ciyaareedka 2018/19
CAJIIB: Cristiano Ronaldo oo rikoor cusub ka dhigay Instagram-ka… (Muxuu sameeyey?)